Aiza no hanombohana ny fananana vohoka ho an'ny vehivavy, lehilahy, vitamina, fitsapana
Ny fomba fiasa tsara sy mahomby amin'ny fahaterahan'ny zazakely dia toetra mampiavaka ny olona izay manapa-kevitra amin'ny fanapahan-kevitra tompon'andraikitra. Ny fiterahana dia tokony hanomboka ela be alohan'ny fotoana mivaivay, mba hiarovana ny zazakely amin'ny ho avy amin'ny fanovana rehetra mety amin'ny fandrosoana ka hatramin'ny lehibe indrindra.
Fitondrana vohoka - aiza no hanombohana?
Ny fanapahan-kevitry ny zaza vao teraka dia manondro fomba roa ahafahan'ny vehivavy mandeha. Ny voalohany dia ny manolotra ny famindrampon'ny natiora ary miandry fotsiny ny fahagagana hitranga. Ny faharoa dia ny mianatra ny zava-drehetra momba ny fandrindrana ny vohoka, ny toerana hanombohana vehivavy, inona ny manampahaizana manokana hitsidika, raha ilaina - ny fitsaboana aretina efa misy. Ny olon-drehetra dia tia kokoa ny ray aman-dreny tompon'andraikitra, satria isan-taona dia mihamaro ny isan-jato amin'ny olana miteraka, ary koa ny fahasalaman'ny reny sy ny foetus.
Na dia talohan'ny fananganana vohoka aza, mandritra ny volana maromaro, vehivavy iray dia mila miezaka manova ny fomba fiainany ho an'ny tsara kokoa - mandany fotoana bebe kokoa amin'ny ordinatera, mandehandeha be, mihinana tanteraka, misoroka ny toerana feno toerana ahafahanao manangona mangatsiaka izay tsy hivoaka. Voarara tanteraka:
ny fifohana sigara;
mampiasa kafeinina sy toaka;
Mandehana any amin'ny bandro, sauna, ary ampiasaina fandroana mafana;
mba hahatsapa ny adin-tsaina.
Ny fanadihadiana rehefa manomana vohoka
Ny mahafantatra ny toetry ny fahasalamana alohan'ny fampakaram-bady ho an'ny ray aman-dreny hoavy dia ilaina izany, ny fandrindrana ny vohoka. Raha ny marina, matetika, miaraka amin'ny olana maro izay nipoitra nandritra ny taom-piterahana na ny fiterahana, dia tsy ho afaka ny hihaona, raha toa ny mpivady tsy nanao ny tenany ho tsy misy dikany. Inona avy ny fitsapana tokony hatao rehefa manomana vohoka ny ray aman-dreny amin'ny hoavy?
Lisitr'ireo fitsapana ho an'ny fandrindrana vohoka ho an'ny vehivavy
Ny fiomanana amin'ny fahaterahana dia zava-dehibe ho an'ny rehetra, saingy zava-dehibe tokoa raha toa ka efa nisy ny fanelingelenana tampoka teo aloha, ny tsy fahampian'ny fivoaran'ny foetal ary raha toa ka tsy ela dia mipoitra ny fampangatsiahana. Ny reny hoavy dia nomena fitsapana hormonina rehefa manomana vohoka, izay ahafahanao mahita tanteraka ny sarin'ny hormonal background sy ny anton'ny olana. Ireo mpivady izay tsy nahay namorona zazakely nandritra ny fotoana ela dia efa mahafantatra azy ireo, ary ny sasany amin'izy ireo dia mianatra momba azy ireo sambany. Ireto ny:
Ny tioboxina mahazatra sy maimaim-poana.
Raha hita fa mihabetsaka ny hormonina iray na maromaro kokoa, dia alefa ny fitsaboana sahaza, indraindray mampiasa fanafody hormonina. Aorian'ny fisedrana, mety ilaina ny mamporisika ny oviana ho an'ny fanomanana vohoka. Izany dia mitaky fotoana sy mandalo fitsaboana matotra.
Ao amin'ny gynecology, misy ny teny hoe "fiomanana mialoha ho an'ny bevohoka." Ny dikan'ny fehezanteny dia mihena amin'ny fanadihadiana lalina, mba hahazoana ny fahatanterahana feno, ny fametrahana sy ny fanomezana ny olana. Vehivavy dia mila mandalo:
Ny fandinihana mahazatra dia ny rà, ny urine.
Ultrasound ny kelikely.
Fanadihadiana momba ny fototeny Rh.
Fitsipika momba ny Genesisy.
Fanadihadiana momba ny aretina (ureaplasmosis, klamidia).
Maka hoditra amin'ny mikroflora vagininina.
Fanadihadiana ho an'ny lehilahy amin'ny fandrindrana ny fitondrana vohoka
Ny olona manomana ny maha-ray aman-dreny dia zava-dehibe koa ny manatona ny fahavokarana amin'ny fomba mahomby, satria ny fahasalamany dia miankina amin'ny kalitaon'ny sira sy ny fahasalaman'ny zaza ho avy. Ilaina ny handalo fitsapana sasany:
Ultrasound of thorax.
Biochemistry of ra.
Famaritana ny fotony Rh.
Fandinihana ny urine sy ny ra.
Blood PCR sy ELISA.
Inona no fitsapana atolotry ny lehilahy iray rehefa mikasa ny bevohoka, raha tsy nahomby ny ezaka rehetra teo aloha, dia tokony omen'ny mpampianatra urologista, ary raha ilaina izany - amin'ny alalan'ny génétainist. Anisan'izany ireto:
Ny hormones dia testosterone, gonadotropine, insuline.
Fandinihana ny tsiambaratelon'ny prostate.
Sakafo rehefa manomana vohoka
Ny fatran'ny ray aman-dreny iray dia manana andraikitra lehibe amin'ny fahatanterahan'ny fahatanorana. Raha ny marina, ny fahaizana manosotra ny atody iray dia spermatozoa tsara sy sasantsasany vehivavy, izay mipetraka amin'ny zavatra mahasoa. Mila manova tsikelikely ny sakafo. Ny vatany dia hanam-potoana hiatrehana ny fanavaozana, ary amin'ny fotoana mety dia hamaly araka ny tokony ho izy. Inona no atao amin'ny fandrindrana ny fitondrana vohoka, raha fantatrao amin'ny fandraisana dokotera izay hanampy amin'ny fanangonana afa-tsy ny sakafo mety ary manala ireo izay manisy ratsy.
Sakafo rehefa manomana vohoka ho an'ny vehivavy
Ny asa lehibe indrindra amin'ny fahitana sy ny fitondran-tena dia mitoetra amin'ny vehivavy. Midika izany fa tokony hisaina amim-pitandremana ny sakafo amin'ny fitondrana vohoka ho an'ny vehivavy. Ny fandanjana sy ny fanamafisana no fitsipika fototra amin'ny fananganana sakafo mahasoa. Raha manaiky fehin-kevitra diso momba ny fanovana ao amin'ny sakafo ianao ary misy fetrany, dia hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahafaham-baraka izany. Ny vokatra notakiana nandritra ny vanim-potoana fanomanana dia mitambatra:
voankazo, voankazo, voanio, soja, voanio (almonds, tantanana), lafarina misy siramamy;
karaoty, fitaratra, brokolika, tongolo, voninkazo, legioma tavin-kena;
ronono, atody, toeram-pokontany, hena, trondro vary varieties;
brydona, rindrina, alikaola, tendrombohitra lavenona, abriko;
menaka tsy mena.
Sakafo ho an'ny lehilahy rehefa manomana vohoka
Ny lehilahy tompon'andraikitra dia mahatsapa ny fandraisany andraikitra amin'ny zaza vao teraka, amin'ny fahatakarana fa ny drafitra ny fitondrana vohoka dia mitovy amin'ny roa. Raha ny zava-misy, raha misy olona manana sakafo tsy dia tsara loatra, mahantra amin'ny vitamina sy microelements, dia mety tsy ho vokatra ny fibobohan-toaka. Izany no antony nanomezan'ny dokotera anjara ao amin'ny sakafo:
seafood - octopus, shrimp, tuna, trout, kalle dranomasina;
legioma - spinach, persily, ravina, siramamy, seleria, kohitra;
Sakafo - ronono, zanak'ondry, aty;
voankazo sy voankazo - apples, strawberries, akondro, avocados, kiwi, voankazo voankazo;
voankazo sy legume - voamadinika, sesame, vary, vary, katsaka;
menaka legioma sy menaka.
Ny sakafo ho an'ny lehilahy rehefa manomana vohoka dia:
kafe sy dite mainty mainty;
fisotroana dronono sy labiera;
sakafo fanampiny sy sakafo fanampiny;
be dia be.
Vitaminina amin'ny fandrindrana ny fitondrana vohoka
Na dia mihabetsaka aza ny fihenan'ny sakafo amin'ny vokatra ilaina dia mampitombo ny famokarana zavatra tena ilaina ao amin'ny vatana, ny fampiharana vitaminina manokana alohan'ny fiterahana, ny ray aman-dreny dia mampitombo ny fahafahana miteraka zazakely salama. Ny singa notakin'ny sakafo dia ny asidra folika. Hita ao amin'ny tifitra legioma sy zezika atsy ambony, fa tsy ampy izany. Ilaina ny maka ny zava-mahadomelina ao anaty takelaka.
Vitaminina ho an'ny lehilahy amin'ny fandaminana ny fitondrana vohoka
Amin'ny alalan'ny fitarihana ny hery rehetra hanatsara ny vatana amin'ireo zavatra ilaina ao anatin'ity vanim-potoana ity, ny ray dia afaka manova tsara ny endriky ny tsirilahy. Mba hanaovana izany dia tokony handao haingana ny fahazaran-dratsiny izy, hanova ny sakafo, ny fomba fiainany. Ny vitaminina ho an'ny lehilahy amin'ny fandinihana ny fitondrana vohoka, ny lisitra izay omen'ny dokotera dia tokony hampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny vehivavy - roa na telo volana talohan'ny fahaterahana. Ireto ny:
Asidra folika hanatsarana ny fahalemen'ny spermatozoa sy ny fanabeazana mety;
selenium, voatery hampitombo ny faniriana ara-nofo;
Tocopherol (vitamin E) miaro ny spermatozoa amin'ny fiantraikany ratsy eo amin'ny singa ivelany;
Ny ascorbic (Vitamin C) dia mampiavaka tsara ny testosterone, izay mandray anjara amin'ny famokarana voa tsara;
Ny Zinc dia mety hisy fiantraikany amin'ny fambolena ao amin'ny faritra misy azy.
Vitaminina rehefa manomana vohoka ho an'ny vehivavy
Ankoatra ny asidra folika, inona no karazana vitamina tokony hosotroina rehefa manomana vohoka ho an'ny vehivavy iray, ny dokotera tsirairay dia mahafantatra sy manoro hevitra ny marary. Ireto ny:
Ireo akora izay mampitombo ny fahavokarana vehivavy dia tafiditra ao anatin'ireto fanafody manaraka ireto:
Afaka milalao fanatanjahantena ve aho rehefa manomana vohoka?
Ny renim-pianakaviana iray izay tsy mba nanao fanatanjahan-tena mihitsy dia tokony hiomana ary hanampy ny vatana amin'ny alalan'ny fitondrana vohoka amin'ny fahasalamana tsara. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny fanatanjahantena amin'ny fandrindrana ny vohoka dia avela amin'ny vatana kely. Fifidianana mahafinaritra, mora mihazakazaka, yoga. Saingy avy amin'ny dian'ilay mpandika-teny dia tsara kokoa ny mandà. Ny endrika ara-batana tsara dia ho tsara kokoa amin'ny fitondrana ny zaza.
Ny firaisana ara-nofo rehefa mikarakara ny fiterahana
Fotoana fohy alohan'ny fanombohan'ny fanabeazana dia manomboka ny fanomanana azy ho azy. Tsy ilaina ny fandavana ny firaisana ara-nofo amin'io fotoana io. Amin'ny hariva fotsiny ny andro "X", tokony ho herinandro vitsivitsy alohan'ny tokony hifehezana ny firaisana ara-nofo. Ny fomba fanaovana firaisana ara-nofo rehefa manomana vohoka, ny andraikitra manan-danja dia tsy milalao, fa ny fisian'ny orgasme ny vehivavy dia tena zava-dehibe. Ny dokotera sasany dia mbola manome toro-hevitra avy hatrany rehefa misy fihetsika feno fitiavan-tena mandry kely amin'ny fihazakazahana na ny fampiasana azy amin'ny fidirana lalina mba hahatonga ny fampirimana lehibe kokoa.
Ny rafitry ny tsirilahy
Ny vokatry ny IVF amin'ny fahasalaman'ny vehivavy
Ny tsy fahampian'ny vehivavy
Endometria maitso sy bevohoka
Ny fahantrana aorian'ny anembrion
Te-kambana aho - ahoana no hanaovana izany?
Hafiriana no iainan'ny atody?
Laser fanavaozana laser marika
Ny fivalozana dia avy amin'ny atody henry
Marika famantarana ny schizophrenia amin'ny vehivavy
Nahoana ianao no manonofy havandra?
Plumeria avy amin'ny voa ao an-trano
Sakafo misy alikaola - ahoana no hahandro?
Ultrasound of the heart fetal
Ahoana no hamehezana fehikibo eo amin'ny akanjo?
Inona no tokony ho tena lehilahy?
Ahoana ny fampiasana ny metatra?
Rotary CCTV Camera
Ny biography of Whitney Houston
Ny labozia misy ny nostatin avy amin'ny tongotra